Hevitra mikasika ny fahombiazan'ny seminera: Ahoana no atao amin'ny spam Google Analytics?
Ny orinasa rehetra dia afaka manangana orinasa iray mahomby amin'ny aterineto. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, tranonkala izay manana fomba fiasa tsara fitadiavana SEO dia manampy ny webmasters hahatratra ny haavon'ny haavon'ny aterineto. Amin'ireo tranga ireo, ireo mpampiasa tranonkala dia mampiasa teknolojika ara-barotra tahaka ny Search Engine Optimization (SEO). Amin'ireny tranga rehetra ireny, ny tanjona dia rafitra hentitra izay afaka manova ny fisian'ny marika. Ao amin'ny varotra an-tserasera, ny SEO sy ireo paikady ara-barotra hafa dia mamorona tranonkala iray manao drafitra maromaro ao amin'ny fandaharam-pivarotana ara-barotra. Amin'ireny tranga ireny, ny tranonkala dia sarotra ny mahita toerana mafonja ao amin'ny sehatry ny fikarohana fikarohana . Maro ny fanitsakitsahana spam an-tserasera amin'ny radar an'ny e-commerce maro. Ny fanafihana Spam Google Analytics dia mety hampihena ny raharaham-barotra sy ny ankamaroan'ny fanentanana ara-barotra.
Nanazava i Andrew Dyhan, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services, ny fomba fitantanana ny Spam Google Analytics.
Ny orinasa rehetra misy vohikala sy drafitry ny varotra amin'ny aterineto dia afaka mandray soa amin'ny fanakanana ny Google Analytics Spam. Ao amin'ny ankamaroan'ny fampihetseham-peo, ny lafiny samihafa amin'ny fivoaran'ny tranonkala dia miteraka vahaolana amin'ny fahantrana amin'ny famelezana spam. Ireo spam referansy dia mamelatra ny angona ao amin'ny tranonkalanao ary mitarika amin'ny fametrahana angon-drakitra diso..Azonao atao ny manao fitakiana ara-barotra tsy ara-drariny rehefa mamaky ny angon-drakitra momba anao ao amin'ny tranokalanao. Ny iray amin'ireo fomba entin'ity tranonkala ity manatanteraka ireo baiko ireo dia ny famafana ireo safidy azo avy amin'ny Google Analytics Spam. Azon'izy ireo atao ny manonofy ratsy, nefa tsy maneho ny tena mpanjifany izy ireo, izay tena mahazo vola.
Spambots amin'ny Google Analytics
Amin'ny toe-javatra sasany, ireo mpitsidika maneho ao amin'ny tranonkalanao dia mety ho solosaina finday. Ireo masinina ireo dia afaka manimba ny serivera. Ny fandàvana ny fanafihana amin'ny serivisy dia mikendry mpizara ary mametraka izany miaraka amin'ireo dom-pifamoivoizana botnet maro. Ao amin'ny Google Analytics, ireo fitsidihana aterineto dia miseho ho toy ny ordinatera henjana izay manana fanatrehana an-tserasera. Amin'ireny tranga ireny, dia afaka mampiasa orinasa ara-dalàna ny orinasam-pandraharahana amin'ny sehatra iraisam-pirenena toy ny ara-dalàna ara-dalàna ara-dalàna ao anatin'ny faritra mitovy. Tokony hampivoatra fomba iray ahafahana manavaka ny fitsidihan'ny solosaina amin'ny fitsidihana manokana. Amin'izany fomba izany, afaka mamafa ny endriny ao amin'ny Google Analytics ianao. Ny fanesorana spam botsotra dia afaka mamela malalaka ny Google Analytics Spam anao amin'ny sasany amin'ireo fanafihana maro izay manohintohina ny toetry ny fiarovana amin'ireo faritra maro mahaliana.
Fanesorana ny Spam Google Analytics
Manana kaonty Google Analytics ny ankamaroan'ny webmaster. Azonao atao ny mamantatra ny sasany amin'ny fifamoivoizana avy amin'ny sehatra spamming. Ny Google Analytics dia manampy ny olona hanakana ny fifamoivoizana amin'ny fifandraisana amin'ny fampiasana sivana sasany. Azonao atao ny mampihatra ireo fanovana ireo amin'ny alàlan'ny fanentanana ara-barotra amin'ny Internet amin'ny fidirana amin'ny kaonty Google Analytics admin. Amin'ity ampahany ity dia afaka mahita fomba maromaro hanitsiana ny fitantanana ny orinasa ianao ary koa ny tranonkala fanadihadiana maro momba ny fampivoarana ny sehatr'asa manontolo amin'ny tranonkala.
Ny orinasa rehetra dia afaka mandray soa avy amin'ny fananganana orinasa iray mahomby amin'ny aterineto. Vokany, maro ireo orinasa mahomby manana tranokala e-commerce miaraka amin'ny SEO sasany. Azonao ampiasaina ity toro-lalana ity hanesorana ny Spam Google Analytics amin'ny tranonkalanao. Azonao atao koa ny manatsara ny data Google Analytics mba hahazoana fanazavana momba ny metrik-barotra manontolo Source .